पढ्‍नुस/बिर्सनुस् : झोकतान्त्रिक गठबन्धन
विवश वस्ती आइतवार, आश्विन २९, २०७४
तीन–चार पटक ग्रिन टीको चुस्की लिएपछि मेरा प्रिय काका केही हदसम्म शान्त देखिए । नभए उनलाई उत्तेजना र आवेगको पर्खालले थिचिरहेको थियो । त्यही शान्त क्षणको अपूर्व फाइदा उठाउँदै मैले काकासामु जिज्ञासा पोखें, ‘काका, यो तपाईहरूको गठबन्धन लोकतान्त्रिक गठबन्धन हो कि झोकतान्त्रिक गठबन्धन हो ? मैले त केही बुझ्नै सकिनँ ।’
‘फिप्टी–फिप्टी प्रतिशत ।’ ग्रिन टीको स्वादमा भुल्दै काकाले शान्त स्वरमै भने, ‘हाम्रो गठबन्धन आधाचाहिँ लोकतान्त्रिक हो, आधाचाहिँ पूरै झोकतान्त्रिक । त्यस्तो झोक चलाउने काम कसैले गर्न सुहाउँछ ? त्यसरी हामीलाई झोक चल्ने गरी तिनेरूले गठजोड गर्नुहुन्छ ? केही अत्तोपत्तो, सुइँको, चालचुल नै नगरी रातारात घाँटी जोड्नुहुन्छ, भन्या । हो, हामीले पनि तिनेरूको घाँटी जोडाइको झोकमा गठबन्धन बनाउने निर्णय गर्‍यौँ ।’
‘हरेक कोणबाट हेर्दा तपार्इंहरूको गठबन्धन ‘झोकतान्त्रिक’ नै ठहर हुन्छ । उनीहरूले थाहा पत्तो नै नदिई गठबन्धन गरेको झोकमा तपाईंहरूले अर्को गठबन्धन गर्नुभयो । उनीहरूका गठबन्धनलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?’ मैले काकाको ताजा प्रतिक्रिया बुझ्न चाहेँ । काकामा मौजूद शान्तपन एकाएक मेटियो र आफूलाई आवेगको छेउछाउ उभ्याउँदै भने, ‘तिनेरूको गठबन्धन पूरै अपवित्र छ, अशुद्ध छ । सुनपानीले नछर्किएसम्म तिनेरूको गठबन्धन पवित्र र शुद्ध हुनै सक्दैन । अतः तिनेरूले आफ्नो गठबन्धनलाई शुद्ध बनाउने हो भने सुनपानीले छर्किनै पर्छ । मेरो अन्तिम निचोड यही नै हो ।’‘हैन, सुनपानीले छर्केर पनि राजनीतिक गठबन्धन पवित्र र शुद्ध हुन्छ र, भन्या काका ?’ म चकित परेँ । किनकि, काकाको कुरा मलाई कता कता गैरराजनीतिक लाग्यो । ‘अवश्य ।’ काका दृढ देखिए ।
‘हामीकहाँ सुन त विदेशबाटै भित्रिन्छन् । तर, कता र कुन दिशाबाट भित्रिएको सुनपानीले छर्किँदा पवित्र हुन्छ, काका ? उत्तरी दिशाबाट भित्रिएका सुनले कि दक्षिणी भेगबाट भित्रिएका सुनले ?’ मभित्र जिज्ञासाका सघन बादलहरू झनै मडारिन पुगे । ‘तिमी आफैं बुझ्झकी छौ । तिनेरूले कताका सुन मन पराउँछन् भन्ने कुरा घटनाक्रमले प्रस्टै देखाइसक्यो । त्यसैले जताका सुन मन पराउँछन्, त्यतैका सुनमा पानी डुबाएर छर्किए भने तिनेरूको गठबन्धन शुद्ध हुन्छ ।’ काकाले दोस्रो पटक कपमा ग्रिन टी थप्दै भने र मलाई पनि ग्रिन टी थप्न इसारा गरे । ‘अनि काका । तपाईंले झोकै झोकमा गठबन्धन बनाउने घोषणा गर्नुभयो । आखिर, झोकचाहिँ किन चल्यो ? कसरी चल्यो ? अन्ततः भेंडा भेंडासँगै र बाख्रा बाख्रासँगै हुनुलाई राम्रै मान्नुपर्छ नि, हैन र ?’ मैले एकपछि अर्को जिज्ञासा तेस्र्याउँदै गएँ ।
‘तिम्ले कुरा बुझेकै छौ । तिमी आफैं भन न । पहिला एक जनासित सँगै भोजन गर्ने भनेर मिलिजुली तरकारी काट्ने र कसौंडीमा चामलसम्म बसाउने तर भात छड्किनै लाग्दा अर्कैको भान्सामा छिरेर भोजन गर्न तम्सिन मिल्छ ? यो त सोह्रै आना धोका भएन र ? यस्तो भएपछि कसलाई झोक चल्दैन र ? त्यसैले हामीले पनि त्यही झोकमा अरूलाई भोजन गर्न निम्त्यायौँ । यी सबै तिनेरूको बानीबेहोराले गर्दा निस्किएको झोकको परिणाम हो ।’ काका झनै उत्तेजित देखिए ।
दोस्रो पटक थपिएको ग्रिन टी रित्तिइसकेपछि मैले काकासँग बिदावारी हुँदै भने, ‘ल, काका, म आउँदै गरूँला । तपाईंहरूको झोकतान्त्रिक गठबन्धन मल र पानीको प्रबन्ध मिलाउनेहरू भेटिउञ्जेलसम्म फलोस्, फुलोस् ।’